Xirmooyinka Arduino iyo looxyada si looga bilaabo adduunkan | Qalabka bilaashka ah
Bilaabidda Arduino: guddiyadee iyo xirmooyinka ayaa ka xiiso badan in la bilaabo
HWLibre waxaa jira mashaariic fara badan oo lagu fuliyay iyadoo lagu saleynayo mid ka mid ah xulashooyinka kala duwan ee Arduino ee ku jira suuqa aan ka hadalnay. Runtu waxay tahay in fursadaha ay badan yihiin oo, sida badanaa dhacda, mid walbaa wuxuu leeyahay waxyaabo u gaar ah oo inta badan waa ka xiiso badan yahay inta kale si loo hirgeliyo mashruuc cayiman astaamaheeda.
Sababtaas awgeed maanta waxaan dooneynaa inaan hakanno waxoogaa iyo, halkii aan ka sii wadi lahayn inaan ka hadalno mashaariic kala duwan, waxaan qaadaneynaa hawo yar oo aan la kulannaa si aan ugala hadalno mawduuc aad u fudud iyo in sida xaqiiqada ah, markii aan bilownay adduunkan, ay noo adeegi lahayd caawimaad maadaama ay macno ahaan tahay halka laga bilaabayo, wax runtii hubaal waxtar weyn u leh dhammaan dadkaas oo ka bilaabaya adduunkan madaddaalada iyo ciyaarta leh.
Haddii aad heerkan gaartid, hubaal waxaad u jeceshahay wax kasta oo aqoon gaar ahi kuu soo bandhigi karto taas oo kuu oggolaan doonta, tusaale ahaan, inaad sameysato aalado kuu gaar ah, aad otomaatig uga dhigto ficillada kala duwan ee maalinlaha ah ee aad ku qabato gurigaaga ... iyo dhammaantood taasna waxay ku mahadsan tahay adeegsiga qalab aad u jaban oo qalab-bilaash ah. Ma bilaabi karnaa?
1 Waxaa jira noocyo kala duwan oo guddiga Arduino ah, midkee ayaan doortaa?
1.1 Looxyada rasmiga ah ee Arduino
1.2 Arduino looxyada ku habboon
2 Xirmooyinka bilowga ah ee lagu taliyay
Waxaa jira noocyo kala duwan oo guddiga Arduino ah, midkee ayaan doortaa?
Markaad si cad u qeexdo waxaad rabto inaad sameyso, laga yaabee talaabada ugu horeysa inay si sax ah u go'aansato guddiga Arduino ee aad dooranayso Rumayso ama ha rumaysan, runtu waxay tahay in go'aankani uu aasaas u noqon doono natiijada ugu dambeysa ee aad hesho tan iyo tan qaab dhismeedkeedu wuu yarayn karaa fikradahaaga iyo wixii ka sarreeya dhammaan xalka aad qaadan karto si mashruucu u qaabeeyo.
Qodob muhiim ah ma aha oo kaliya cabirka iyo duruufaha durugsan ee aad ku xirmi karto, laakiin guddiga laftiisa maadaama aan kaligeen ku xaddidi karin kaliya helitaanka Arduino sidaan oo kale, waxaan ula jeedaa guddi rasmi ah, laakiin sidoo kale moodelladan rasmiga ah (Halka waa dhowr qaabeyn) waa inaan ku darnaa wax walbo oo dhamaan gudiyadaas iswaafajiya ay na siinayaan, wax si weyn u balaarinaya xulashooyinkeena tan iyo, hadii marka hore Waxaan u baahanahay cabir gaar ah iyo isku xira nooc cayiman, laga yaabee in guddiga rasmiga ah uusan soo bandhigin laakiin mid la jaan qaadaya.
Looxyada rasmiga ah ee Arduino
Arduino, sanadihii la soo dhaafay (waxay ku jirtay suuqa illaa 2006) ayaa laga soo gudbay in lagu bixiyo qaab hal ah oo ahaansho waxaa laga heli karaa maanta oo aan ka yarayn 12 nooc oo kala duwan taas oo, markii waqtigu yimaado, aan ku dari karno kuwa horay loo joojiyay. Waqtigan xaadirka ah, haddii aadan heli karin guddiga ku habboon baahiyahaaga, waxaa laga yaabaa inaad ka heli karto mid ka mid ah waxyaabaha lagu daro, kordhinta, iyo xirmooyinka ay Arduino si rasmi ah ugu iibiso degelkeeda ama mid ka mid ah kuwa rasmiga ah ee wax u qaybiya.
Waqtigan xaadirka ah, sida aad ku arki karto sawirkii hore, asal ahaan kala duwanaanshaha u dhexeeya xulashooyinka ay Arduino na siiso waxay ku saleysan tahay inta badan baaxadda, isku xirnaanta iyo tirada labadaba analogga iyo alaabada la soo galiyo iyo wax soo saarka labadaba oo ay saxanka la doortay leeyahay. Hal qodob oo ay tahay inaynu tixgalino waa xusuusta gudaha ee gudiga laftiisu bixiyo, sidaa darteedna ay u sii murugsan yihiin (heerka koodhku) mashruuca aan kor u qaadno, wuxuu u baahan doonaa xusuus weyn.
Ka mid ah xulashooyinka kala duwan ee aan haysanno, waxaan ku jirnaa tallaabada ugu horreysa ee Wax alaab ah lama helin., iyada oo aan shaki ku jirin qaabka ugu aasaasiga ah iyo markiisa midka leh tirada ugu badan ee wax-soo-saarka iyo wax soo saarka. Fikradayda, waa wax ku habboon haddii aad bilaabayso.
Hal talaabo ka sareysa ayaan helnaa Arduino eber, ku habboon haddii aad u baahan tahay awood dheeri ah maaddaama ay leeyihiin processor ka awood badan iyo xusuus weyn RAM iyo ROM labadaba. Haddii ay dhacdo inaad u baahato wax-soo-saar dheeri ah oo dheeri ah oo aad ku xirto qaybo kala duwan, ikhtiyaarka ugu habboon wuxuu noqon lahaa mid mid Arduino Mega.
Waqtigan xaadirka ah, faahfaahin waa in lagu tixgeliyaa, hal dhinac, xaqiiqda in nasiib daro waxaa jira guddiyo badan oo been abuur ah oo Arduino ah oo suuqa yaala, taas oo, mararka qaarkood noqon karta mid aad u adag in la ogaado haddii ay run yihiin ama ay been yihiin, gaar ahaan haddii aan raadineyno a Arduino Uno. Marka labaad, waxaan kuu sheegayaa in taarikada Arduino waxaa loogu talagalay suuqa Mareykanka oo kaliya, halka wixii ka baxsan calaamadan loo iibiyo sidii dhab farqiga kaliya ee udhaxeeya labada noocba waa sharci iyo arimaha suuq geynta.
Arduino looxyada ku habboon
Waqtigaas, gaar ahaan markaad aqoon ku filan u leedahay qalabka elektarooniga, xitaa waad tixgelin kartaa fikradda ah inaad dhisto guddi kuu gaar ah oo la jaan qaada dhammaan xirmooyinka iyo qalabka Arduino. Tani waa si sax ah fikradda ah in soosaarayaal badan ay raaceen kuwaas oo si macno leh uga faa'iideystay jiidashada iyo caannimada barnaamijkan si ay u bixiyaan xalal, qaar aad u xiiso badan, si buuxda ugu habboon a Qiimaha Hoose.
Taarikada ku habboon ee aan heli karno waxaa ka mid ah, waa lagama maarmaan in la kala saaro taas, feker ahaanteyda, kuwa ugu fiican ayaa ah kuwa kuu oggolaanaya isticmaal deegaanka horumarka Arduino bixisaa In kasta oo, heerka qalabka, ay kuu oggolaanayaan inaad isticmaasho isla qalabkaas, gaar ahaan marka la eego qaybaha, maaddaama, qaybaha, waxaad sidoo kale ka heli doontaa soo saarayaal badan oo kala duwan oo leh soo jeedimo aad u kala duwan. Tusaalooyinka kala duwan ee aan ka heli karno waxay muujinayaan sida ugu fiican ee loo yaqaan, gaar ahaan bulshada jirta iyo in, marka waqtigu yimaado, ay faa'iido badan u yeelan karto su'aalaha la xiriira taageerada farsamada:
Freedino: Waxaa laga yaabaa in sida ugu fiican loo yaqaan, qoyskan la jaanqaadka Arduino uu leeyahay dhowr moodal oo looxyo ah noocyada asalka ah Qaabka ugu badan ee lagu taliyay waa Epic, oo u dhigma Arduino Mega oo qiimihiisu yahay $ 44.
Zigduino: Mid ka mid ah moodooyinka iswaafajinaya ee ku daraya shaqeyn dheeri ah kudhowaad isla qiimaha asalka. Xaaladdan oo kale, waxaa ku jira isku xirnaanta Zigbee ee $ 70.
Funduino: Mid ka mid ah moodooyinka ku habboon Arduino Uno ugu macquulsan ee aad heli karto. Waxay ku kacaysaa wax ka yar 7 euro waxaana jira moodooyin la jaan qaadaya noocyo badan.
Freaduin: Sida aad u aragto, qayb ka mid ah khiyaanooyinka looxyada iswaafajiya ayaa ah in lagu murmo magaca laga yaabo in looga faa'iideysto jahwareerka. Qaabkani wuxuu u dhigmaa guddiga Uno laakiin wuxuu ku kacayaa kaliya 18 euro.
SaintSmart: La jaan qaadaya Arduino Mega 2560, waxay ku kacaysaa wax ka yar 20 euro.
XcSource: Mid ka mid ah moodooyinka ugu xiisaha badan waa midka la jaan qaadaya Arduino Uno, waxayna ku baxeysaa 12 euro.
BQ Zum Core: In kasta oo guddigan uu yahay mid aad u xiiso badan, haddana runta ayaa ah inaad ka taxaddarto inaysan gebi ahaanba la jaan qaadi karin Arduino. Fikradda ayaa ah in xulashadan kadib beel dhan la abuuray halkaas oo aad ka heli karto qaybo, casharro, taageero iyo xitaa jawi barnaamij oo la jaan qaadi kara looxyada Arduino.
Xirmooyinka bilowga ah ee lagu taliyay
Marka aan go'aansanno guddiga ugu xiisaha badan mashruuceenna, ha ahaado mid rasmi ah ama mid waafaqsan, waa waqtigii la iibsan lahaa xirmo. Asal ahaan marka la dooranayo guddiga waxa aan haysano waa kan, guddi, laakiin waxaan u baahanahay cunsurro kale sida fiilo USB ah oo aan ku shuban karno barnaamijkeenna xusuusta ama aan ku quudineyno koranteeda qaybo badan oo adag oo macno dheeraad ah siinaya mashruuc dhan.
Si aanan isku mashquulin wax badan, maadaama dalabaadka mashruuca ay naga dhigayaan inaan si dhab ah u ogaanno waxa aan u baahan karno ama aanan u baahnayn, waxaan sii wadi doonaa inaan faallo ka bixiyo xirmooyinka bilowga ah ee aad ka heli karto dukaan kasta oo rasmi ah ama qaybiyaha sumadda, labadaba ka Arduino lafteeda, iyo sidoo kale mid kasta oo ka mid ah looxyada iswaafajiya. Dareenkaan, waxay kuxirantahay qaybaha lagu daro xirmada, waxay noqon doontaa mid qaali ah ama ka qaalisan, xulashooyinku waa kuwo aad u tiro badan oo kaladuwan:
Qalabka Rasmiga ah ee Arduino: Xirmada bilowga, Isbaanishka iyo buugaagta iyo mashaariic kala duwan oo diyaar u ah inay is urursadaan.
Kit Arduino Nooca Sparkfun 3.2: Qalabka rasmiga ah ee loogu talagalay bilowga iyo heerka dhexe ee wax kasta oo aad ugu baahan tahay mashaariicda ugu horreysa ee barnaamijka iyo isdhexgalka qalabka. Waxaa ku jira buug dhammaystiran oo Ingiriis ah laakiin nooca Isbaanishka ayaa lagala soo bixi karaa khadka tooska ah.
Qalabka Bilowga Arduino: Qalab bilow ah oo dhameystiran oo leh dammaanad tayo leh. Waa xirmada iibisa www.arduino.org (shirkadda gacanta ku haysa astaanta Arduino ee ka baxsan Mareykanka). Qalabkan waxaa ku jira buug ku qoran af Isbaanish, saxan Arduino UNO iyo degello badan oo Isbaanish ah ayaa loo iibiyaa sidii kuwii hore.
Qalabka la jaan qaadaya Arduino Uno R3: wuxuu kakooban yahay 40 qaybood dacwad wax ku ool ah. Waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu jaban.
Wax alaab ah lama helin.: Haddii aad rabto inaad u baxdo guddiga la midka ah ee Funduino, xirmadaani waa mid ka fiican tan guddiga kala duwan.
Qalabka Kuman Super Starter: Ku habboon kuwa bilowga ah. Mid ka mid ah xirmooyinka ugu wanaagsan ee aan rasmiga ahayn ee loo yaqaan 'Arduino xirmooyinka'. Waxay ka kooban tahay 44 qaybood, casharro iyo koodhka isha ee mashaariicda.
Wax alaab ah lama helin.: Xirmo la cusbooneysiiyay 2016-kii oo ka kooban qayb ka badan tii hore (49 qaybood). Waxaa ku jira in ka badan 20 mashruuc oo ku jira qormadan oo dhammaystiran oo leh wax kasta oo aad u baahan tahay si aad uga qayb qaadato si buuxda Arduino.
Qalabka bilowga aasaasiga ah ee 'SainSmart Baster Start': Xirmo Arduino UNO Qiimaha lagu hagaajiyay iyo wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u bilowdo tijaabinta oo aad u fuliso illaa 17 mashruuc adigoo raacaya casharradooda. Kuma jiraan buug-gacmeedka leh casharro tallaabo tallaabo ah laakiin dhammaantood waa la heli karaa si loo soo dejiyo waxayna sidoo kale leeyihiin kanaal YouTube-ka ah.
Qalabka Zum: Iyadoo si taxaddar leh loo soo bandhigayo iyo qaybo kala duwan oo tayo leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Arduino » Bilaabidda Arduino: guddiyadee iyo xirmooyinka ayaa ka xiiso badan in la bilaabo
Kala duwanaanshaha taarikada asalka ah iyo nuqulada, markii aan ka hadlayno saxan iyo softiweerka isha furan wax yar buuqaa…. gaar ahaan markii xubno dhowr ah oo ka tirsan kooxdii asalka ahayd ee soo saaray arduino ay si saraaxad leh ugu tageen xafiiska patent-ka si ay uga diiwaan galiyaan astaanta ganacsiga arduino.
Isku dhafka u dhexeeya Arduino ka mid ah kuwan iyo Libaaxa 2 ayaa si fiican aniga si fiican iiga shaqeeyay. Daabacyada 3D-ga ayaa ku fiican qalabkan ka dibna ku habboon Arduino waxyaabo badan ayaa la samayn karaa
Kuwani waa dhammaan wararka Raspberry Pi 3 Model B + ay bixiso